NextMapping | Hevitra fototra: Ireo ekipa vonona amin'ny ho avy - Ahoana ny fomba hamoronana ekipa mahay, mahay & azo ekena
Tarika vonona amin'ny ho avy - ahoana ny fomba hamoronana ekipa mahay, azo zatra & haitao
Mahavita hiara-hiasa, manavao ary hifanaraka amin'ny fanovana haingana eo amin'ny toeram-piasana ve ny ekipanao?
Mampiasa teknolojia ve ny ekipanao mba hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa sy mpiasa?
Ny ekipa masiaka, mora lenta sy fanavaozana no ho avin'ny asa
Ity hoavin'ny fikaonan'ny ekipa ity dia manome fijery mavitrika amin'ny hoavin'ny ekipa ary ahoana ny fomba firafitry ny ekipa mba hiatrehana ny fanakorontanana tena sy fitakiana ny fanovana haingana ny tontolo. Ny fikarohana dia mampiseho fa ireo ekipa bitika manana olona mavitrika sy mirona dia afaka manova sy manatanteraka haingana. Ny fiantraikan'ny orinasa miaraka amin'ireo ekipa mpanao fampisehoana ambony dia hevitra haingana kokoa amin'ny tsena, vahaolana tsy misy dikany ho an'ny traikefa azon'ny mpanjifa ary farany tombony amin'ny fifaninanana.
Ny fikarohana farany momba ny dinamika ekipa ilaina amin'ny asa ho an'ny asa ho avy
Statistika sy angon-drakitra momba ny ho avy tsara indrindra amin'ny firafitry ny tarika, ny fifangaroan'ny olona manokana, fahaiza-manao sy ny maro hafa
Paikady ho an'ny mambran'ny ekipa hananganana 'ahy ho antsika' ny hoavin'ny asa
Modely ao an-tsain'ny toe-tsaina momba ny fomba hifindra mankany amin'ny kolontsaina eken'ny 'leadership »
Hevitra momba ny fomba hiampitana fiaraha-miasa, handrava ny sangan'asa ary manavao ny sehatry ny asa
Ny fomba hamoronana ekipa marefo, azo zatra ary hanova fomba
Ny fitaomam-panahy ary mikasa ny 'hamaky' ny zava-drehetra ho an'ny ekipanao ho amin'ny ho avy miasa
Cheryl no talen'ny fanokafan-tenantsika ho an'ny fanofanana fanao isan-taona AGA nasionaly ary faran'izay gaga izy!
Ny lahateniny dia mitondra ny lohateny hoe, "The Art of Change leadership - How to Flex in Flux" ary ny hafatra nomeny dia tena ara-potoana ary tena sarobidy amin'ireo mpandray anjara ato amintsika. Nahazo valiny feno fientanentanana be avy amin'ny vondronay momba ny fomba fanaterana mavitrika nataon'i Cheryl, ny fifidianana sy ny fifanarahana momba ny Q&A, ary ny fanadihadiana izay nalefany ho an'ireo mpandray anjara hahalalany ny mpihaino azy sy hanaovany ny fampisehoana azy. Nanomboka tamin'ny fihaonambenay tamin-kery lehibe ny lakilasim-panokafana nataon'i Cheryl - tianay ny horonan-tsary sy ny mozika izay nahafaly ny rehetra nandritra ny andro. "
J. Bruce / Talen'ny Fihaonana
Fikambanan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana